N’ikwu ya, ụbọchị n’ụsọ osimiri kwesịrị ịbụ ụbọchị izu ike na obi ụtọ na anyanwụ, ọ bụghị ụbọchị ịda mba n’ihi na nche anwụ na-efe efe. Ọ dabara nke ọma, arịlịka ụgbọ mmiri kachasị mma iji wụnye ma ndị ahịa nwalere ya ugboro ugboro iji nọrọ ebe ahụ ọbụlagodi mgbe ikuku na-efe.
Enwere ụdị ihe abụọ dị mkpa ị ga-echebara mgbe ị na-azụ ahịa maka onye ọbịa gị:
Dị ka aha ya pụtara, a tụbara arịlịka ahụ n'ime ájá iji mee ka obi kwụsie ike. Styledị a chọrọ ụfọdụ olu ga-abịa bit, a na-ejikarị arịlịka agbatị ahụ na ájá dị warara ma sie ike. Ọ bụrụ na ájá gị tọgbọrọ chakoo ma sie ike, ikekwe ị gaghị enweta ihe ịchọrọ, mana ụdị a siri ike ma sie ike wepụ na njedebe nke ụbọchị.
Arịlịka arịliri dị arọ ga-ejide nche anwụ gị n'ọnọdụ ọ bụ site na iji ájá kpuchie akpa ya. Chodị arịlịka a dị mma ọfụma ma chọọ ike akwara dị ala karịa ụdị ịghasa (ọbụlagodi ụmụaka nwere ike inye aka). Nwekwara ike iburu nri ma ọ bụ akwụkwọ ọgụgụ n'ime akpa gị maka oke ibu. Agbanyeghị, na njedebe nke ụbọchị, nke a chọrọ ọrụ ndị ọzọ iji hichaa ya ma kechie ya.
Chọọ amazon maka arịlịka osimiri kachasị mma, n'agbanyeghị ụdị ụdị ị họọrọ. Ọ bụ ezie na ị ga-azụta nke mbụ abụọ iche iche, m na-etinyekwa nche anwụ nwere anchor.Ra anyị na-akwado ngwaahịa ndị anyị nwere, anyị chere na ị ga-enwe. Anyị nwere ike nweta akụkụ nke ego ahịa site na ngwaahịa anyị zụtara n'isiokwu a, ndị otu azụmaahịa dere ya.